Aleo misoroka hatrany | NewsMada
Aleo misoroka hatrany
Loza etsy, loza eroa… Rano miakatra, tany mihotsaka, vatobe mikodia, andrin-jiro mianjera, vara-datsaka, havandra, sns. Mbola tsy misy rivo-doza anefa, fa fotoam-pahavaratra tsotra ihany… Marina fa iainana isan-taona ny andro ratsy sy izay mety haterany. Tsy voatery hiainana kosa ny loza sy ny antambo toa izao mahazo izao.
Marina fa tsy fotoan’ny fifanomezan-tsiny, rehefa an-koditra toa izao ny loza. Maromaro rahateo ny aina nafoy, vokatry ny fianjeran’ny tamboho, main’ny herinaratra noho ny andrin-jiro nianjera, maty an-drano, sy izay mety ho vokatry ny loza hafa tsy mbola fantatra any. Na izany aza, mipetraka foana ny fanentanana, mba hisorohana araka izay azo atao izany.
Misy ampahany betsaka fahadisoan’ny mpitondra nifandimby, nanjakan’ny kolikoly ka nisian’ireo fanorenana tsy ara-dalàna. Mety mbola hadisoan’izy ireo koa ny tsy nametraka drafitra maty paika hiomanana amin’ny fotoan’ny rivodoza sy ny fahavaratra. Kanefa, tsy izy ireo no nanary fako teny amin’ny arabe. Tsy izy ireo no nanary ny tavoahangy plastika nanentsina ny tatatra. Tsy izy ireo no nanakarama mpanao trano sy tamboho izay mora indrindra, sitrany ahay…
“Aiza ny fandraisana andraikitry ny mpitondra? Fanontaniana mivoaka vetivety ny vava foana io, isaky ny misy tranga miseho. “Fa inona kosa no fandraisana andraikitra nataon’ny tsirairay?”, izay no tena fanontaniana goavana tokony hipetraka.
Raha ho taonan’ny asa ihany re, raha ho tiana ho taon-jina, araka ny firariantsoa nirarakompana ny taona 2020, aleo mba hatao ezaka manokan’ny isam-batan’olona mihitsy izay fanovana toe-tsaina izay. Aleo volena ny toe-tsaina miara-mientana miara-misalahy ho an’ny soa iombonana. Aleo voizina ny lalan-tsaina mifanome tanana hanao zavatra iombonana, tsy miandry mpitondra sy fanjakana. Azo antoka fa efa fisorohana lehibe ny loza mpitranga amin’ireo taona ho avy mifandimby izany.